Enomtsalane 1888 St Lawrence River cottage-Alex Bay
Indlu enomtsalane ebekwe kwindawo enembali yasePoint Vivian. Yakhiwe ngo-1888, indlu igcwele isimilo. Hlala kwiveranda okanye kwidokhi kwaye wonwabele umbono woMlambo iSt Lawrence. Baleka ubushushu kwindawo ekhuselweyo kwi-gazebo ngencwadi elungileyo kunye neglasi yeti yomkhenkce. Ukuba uyakonwabela ukuloba okanye ukukhwela isikhephe i-dock yethu engama-40 iya kulungela wena njengoko ubunzulu bamanzi buyi-20 'iyenza ifikeleleke phantse kuso nasiphi na isikhephe sobungakanani. Kungakhathaliseki ukuba lixesha lonyaka, uya kuhlala uqinisekisiwe ngombono omhle.
Le Cottage yakhiwa ngo-1888 ngoko izinzile kwisiseko sayo. Unokuqaphela eminye imigangatho kunye neengcango zithe tye okanye zi-quirky kodwa yiloo nto eyenza ukuba yohluke kakhulu. Kwakhona, amagumbi amane okulala ayidizayini yompu wesikolo esidala (kodwa aneengcango) . Siyayithanda apha kwaye sinethemba lokuba nawe uya kwenza njalo !!!
Uluntu lwasePoint Vivian luluntu olunobuhlobo nosapho olwasekwa ekuqaleni kweminyaka yoo-1800. Kufuphi nedolophu yaseAlexandria Bay, iClayton kunye neCanada. Ukuba unokuzitsalela kude noMlambo, kukho izinto ezininzi zokwenza ... igalofu, ukunyuka, iinqaba zokutyelela, tyelela eCanada (xa uvula umda) kunye nokunye okuninzi.
Sihlala iyure enesiqingatha ukusuka kude kodwa siyafumaneka ukuba kuyimfuneko.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Alexandria Bay